Thursday September 16, 2021 - 16:09:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa qaaday tallaab u eg xilka qaadis wuxuuna Rooble ku eedeeyay in uu jebiyay dastuurka udegsan dowladda Federaalka.
Farmaajo ayaa warsaxaafadeedkiisa ku caddeeyay in uu hakiyay dhammaan wixii awooda ah ee uu lahaa Rooble isagoo wasiirrada xukuumadda iyo guddiyada doorashada farat in ay sii wataan shaqooyinkooda.
Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay R/wasaarihiisa in uu baalmaray dhammaan sharciyadii DF-ka udegsanaa islamarkaana uu diiday in uu ka amar qaato isaga.
"Markuu xaqiiqsaday in Ra’iisul Wasaaraha latashi iyo wada shaqayn la lahayn Madaxweynaha, isaga oo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go’aanno ku keli ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo Dastuurka dalka taas oo ay ka dhalatay xil-gudasho la’aan;
1. Maadaama Wasiirka Koowaad ee XFS uu jabiyay Dastuurka KMG ah, waxaa la hakiyay awoodaha Wasiirka Koowaad iyo dhammaan warqadaha kasoo baxa, gaar ahaan xilkaqaadis ama xilmagacaabis, inta laga dhammeystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xilsaaran yihiin Guddiyada Madaxabannaan ee magacaaban" ayaa kamid ahaa eedaymaha Farmaajo.
arrintan ayaa cirka kusii shareeri karta khilaafkii siyaasadeed ee kajiray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, tallaabooyinka uu qaatay Farmaajo waxay sababi karaan isku dhacyo hubaysan iyo in waxa loogu yeero beesha caalamka ay la saftaan Rooble.
qaabkii foosha xumaa ee loo dilay sarkaalad Ikraan Tahliil ayaa la rumeysanyahay in ay Farmaajo ku khasabtay in uu qaado wax walba oo uu ku difaacyo Fahad Yaasiin iyo saraakiisha kale ee NISA.